Madaxweynaha Faransiiska oo booqasho ku tagay Sacuudiga | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Madaxweynaha Faransiiska oo booqasho ku tagay Sacuudiga
Madaxweynaha Faransiiska oo booqasho ku tagay Sacuudiga
Muqdisho(SONNA) Emmnanuel Macron,madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay inuu ahmiyad siin doono deganaashaha Lubnaan ka dib markii booqasho aan horay loo sii shaacin uga bilaabatay dalka Sacuudiga.
Booqasgada madaxweynaha Faransiiska uu ku tagay dalka Sacuudiga ayaa ku soo aadeysa xilli uu Sabtidii is casilay ra’iisulwasaarihii Lubnaan Saad Hariri isaga oo ku sugnaa magaalada Riyadh, isaga oo sheegay in uu naftiisa u baqay.
Dowladda Sacuudiga oo lagu eedeeyay iney cadaadis saartay Ra’iisal wasaarihii is casilay ee Mar Xariiri ayaa iska fogeysay kuna eedeysay.islamarkaana shaacisay iney arintaasi wax lug ah ku lahayn.
Macron ayaa sidoo kale sheegay in uu hogaamiyeyaasha Sacuudiga kala hadli doono dhibaatada Yemen ka taagan, ka dib markii xulafada uu Sucuudigu hogaaminayo ay xireen dhammaan marinnadii galayay dalkaas dagaallada la daalaa dhacaya.
Go’doominta ayaa dalka Yemen la saaray Isniintii ka dib markii gantaal laga soo riday lagu bartilmaameedsaday magaalada Riyadh. Waxaa la sheegay in gantaalka lagu qabtay meel u dhaw caasimadda Sacuudiga.
Sacuudi Carabiya ayaa gantaalka ku eedaysay malayshiyada ay Iiraan taageerto ee Xisbullah.
Dad badan oo reer Lubnaaan ahna waxay ka cabsi qabaan in dalkooda uu soo wajahay dagaal gudo wayn oo ay ku lug leeyihiin Sacuudiga oo ah dalka ugu tunka wayn dalalka Suniga ah iyo Iiraan oo Shiicada hogaamisa ahna dalka ugu wayn ee ay Sacuudiga isku hayaan gobolka.
Dowladda Sacuudi Arabia ayaa khamiistii shalay u sheegtay muwaadiniinteeda ku sugan dalka Lubnaan iney sida ugu dhaqsiyaha uga soo baxaan dalkaasi ka dib markii la arkay cabsi dhanka amniga ah.
Previous articleTiro Al-shabaab ah oo lagu dilay Gobolka Baay
Next articleGalmudug oo dar dar gelineyso howlaha shaqo ee Garoomada diyaaradaha